आर्मीलाई मेची नेत्रालय गोल्ड कप | Hamro Khelkud
सोमपालले टि१० मा डेब्यु गर्दै!
आर्मीलाई मेची नेत्रालय गोल्ड कप
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल आर्मीले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई पेनाल्टी सुट-आउटमा हराउँदै मेची नेत्रालय काकरभिट्टा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ । यो आर्मीको वर्षको तेस्रो उपाधि हो ।
निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएपछि खेल पेनाल्टी सुट-आउटमा पुगेको हो । सुट-आउटमा आर्मीले ३-२ ले बाजी मार्‍यो । आर्मीका लागि गोलकिपर विकेश कुथुले मनाङको तीन पेनाल्टी बचाउँदै उपाधि सुनिश्चित गरेका थिए ।
विकेशले अनिल गुरुङ, कमल श्रेष्ठ र निराजन मल्लको पेनाल्टी बचाऊ गरेका थिए । मनाङका विमल बस्नेत र हेमन गुरुङले भने पेनाल्टी परिणत गरे । त्यस्तै जितेन्द्र कार्की र पदम तामाङ पेनाल्टीबाट चुके भने नवयुग श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ र विवेक बस्नेतले भने पेनाल्टीलाई सहि दिशा दिँदै टोलीलाई जिताए ।
यस जितसँगै आर्मीले रु. आठ लाख उपाधिस्वरुप जित्यो भने दोस्रो भएको मनाङले ४ लाख हात पार्यो । सताक्षी गोल्डकपमा पनि मनाङ आर्मीसँग फाइनलमा पराजित भएको थियो र आर्मीले त्यो भन्दा अघि विशाल स्मृति गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो ।